Miisaaniyadda Wasaaradda Gaadiidka ee 2020-ka la Ansixiyay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraMiisaaniyadda 2020 ee Wasaaradda Gaadiidka la Ansixiyay
17 / 12 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, WADADA, Headline, TURKEY
sanadkii wasaaradda gaadiidku ogolaatay
Miisaaniyadda 2020 ee Wasaaradda Gaadiidka la Ansixiyay; Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, ayaa ka hadlay Golaha Guud ee TGNA miisaaniyada 2020 ee Wasaaradda.
Turkey labaduba waa shaqada mustaqbalka iyo sidoo kale maanta, waxaa Turhan tilmaamay wadarta waxay dhihi arrimaha survivability, gaadiidka iyo ganacsiga isgaadhsiinta dhididka daadiyaan 250 kun oo qof "askari ilbaxnimada yihiin" carabka ku adkeeyay Piers u baahan tahay inaad cut.
Turhan wuxuu xasuustaa ereyadii Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, “Wadadu waa ilbaxnimo Tur., Dadkani waxay hiigsanayaan meelihii ugu wanaagsanaa ee dariiqayada iyo ilbaxnimada shaqadooda. Waan uga mahadcelinayaa dhamaan intii joogtay
"Maxaa dhacaya haddii aan ka dhigi hooyo u qurux badan, our badbaadada, waxaan ku sameeyey aawadood oo ah quruun our u tari jirtay." Waxa uu sheegay in Turhan, dunida u tari jirtay kaalin weyn quruun in uu gaaro heerka la joogo ilbaxnimada, gaadiidka sannad 100aad ee Jamhuuriyadda, Turkey ayaa muujiyay in ay doonaan go'aano kama dalalka dunida ee keentay in inta u dhaxaysa qaniinyada dadaal.
Gaadiidka, adeegyada badda iyo isgaarsiinta 17-kii sano ee la soo dhaafay, 757 bilyan 200 milyan oo gini ayaa qarash gareeyay Turhan, ujeedka ugu weyn ayaa ah in la sameeyo isku-dheellitir u dhexeeya noocyada kala duwan ee gaadiidka la tilmaamay.
Turhan wuxuu sheegay inay maalgeliyeen 137 bilyan 500 milyan ginni gabi ahaan wadooyinka tareenka oo ay sanado badan ka fiirsanayaan inay dayaceen wadooyinka tareenada si ay u bixiyaan isku dheelitirnaanta noocyada gaadiidka.
Turhan wuxuu carabka ku adkeeyay inay hadafkoodu yahay inay kordhiyaan saamiga xamuulka ee tareenka iyo gadiidka wadada 2 jeer.
Wadada dhan 68 kun 254 kiilo mitir ”
Wasiir Turhan, wuxuu u qaybiyey dhererka wadada inay gaaraan 27 kun 123 kiiloomitir, 3 kun 60 kiiloomitir oo isku xirka wadooyinka oo ay kujiraan wadooyin dhan 68 kun 254 kiiloomitir, ayuu yiri.
Turhan wuxuu cadeeyay inay mahadsantahay kala goynta wadooyinka, shidaalka iyo xoogsatada kaydinta in kabadan 18 bilyan ginni sanadkii, 40 boqolkiiba wadooyinka la qeybiyey waxay ka kooban yihiin 82 boqolkiiba wadarta wadooyinka, waxay u adeegtaa ku dhawaad ​​boqolkiiba 40 ee taraafikada shabakadaha wadada oo dhan, celcelis ahaan xawaaraha 88 kiiloomitir illaa XNUMX kiiloomitir Waxay soo sheegay.
Wasiir Turhan wuxuu sii waday sida soo socota: “Intii u dhaxaysa sannadihii 2003-2018 taraafikada jid-gooyada ayaa kordhay 92 boqolkiiba. Laakiin waxaa jiray hoos u dhac boqolkiiba 71 ah tirada dadka ku dhintay shilalka taraafikada. Laga soo bilaabo 2003, waxaan u aragnaa tan inay tahay faa'iidada ugu muhiimsan. 17-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan sare u qaadnay heerka 13 422 km hal wado oo waxaan galnay adeeg. Celcelis ahaan celcelis ahaan 14 kun iyo 586 kiilo mitir oo ah shaqadii dayactirka iyo dayactirka ayaan sameynay.
Shabakada wadooyinka isku-dhafka ee kulul ee Bithan ayaa kordhay in ka badan 3 jeer 25 kun 962 kiiloomitir si ay u gaaraan Turhan, waxaa la dhameystiray 1.513 kiilomitir oo wadooyinka giraan ah, 1.183 kiiloomitir ee shaqada ayaa socota iyo wejiga qorsheynta oo ah 915 kiiloomitir, ayuu yidhi.
Ekonomik Waxaan wadnaa falanqaynta dhaqaalaha iyo dhaqaalaha ee mashruuca ”
Wasiirka Cahit Turhan, Europe si Caucasus, listo Bariga Dhexe iyo in network dadweynaha jid oo u sahli doona West si East helaan go 'in Turkey ay buundada isku xirta Central Asia ay sameeyaan iyadoo la kaashanayo qaybaha gaarka loo leeyahay ee, sare u samayn doonaan la habka iskaashiga dawladda-gaarka ah Mashaariicda caadiga ah iyo kuwa qiimaha badan ka hor inta aan la gaarin go'aanka maalgashiga ee falanqaynta dhaqaalaha iyo dhaqaalaha ee mashruuca ayaa la tilmaamay.
Turhan wuxuu cadeeyay inay qiimeynayaan kharashaadka, howlgalada gawaarida, dayactirka, shilalka iyo faa iidooyinka dhaqaale ee la midka ah iyo qarashka uu mashruuc kastaa bixin doono, kana faa iideysan doono dakhliga howlgalada, maal galinta mashaariicda, u wareejinta xarumaha miisaaniyada mashaariicda kale ee leh macaashka bulshada oo sareyso, waxeyna ku nuuxnuuxsadeen inay ku faafinayeen adeega gaadiidka wadanka.
Turhan waa sii socday: sun Waxaan soo kordhineynaa dardargelinta horumarka dhaqaalaha anagoo u fidinayna muwaadiniinteenna waqti aad u gaaban. Tusaale ahaan, Wadada Wadnaha ee Waqooyiga Marmara waa 7 bilyan 950 milyan oo doolar. Qandaraaslayaashu waxay dhammaystiri doonaan mashruuca waxayna ka bilaabi doonaan wakhtiga hawlgalka min 2027 qaybaha 2030 illaa gobolka markay dhammaystiraan waa la keenayaa. Markaa ha siin dammaanad qaadka nolosha oo dhan. 10 sano gudahood, kuwani waa hanti qaran. Waxaan jeclaan lahaa inaan hoosta ka xariiqo inaan sameyno saameynta deegaanka iyo daraasadaha qiimeynta annaga oo aan qaadan go'aan dhismaha. Haddii ay jirto saameyn lama-huraan ah, waxaan isku dayeynaa inaan yareyno oo aan hagaajino tayada nolosha. Waxaan soo sheegay Wadada Waqooyiga Marmara, waxaan beerin 1 milyan 371 kun oo saplings ah halkii 7 milyan 142 kun oo geed ay saameyn ku yeelan laheyd mashruucu. Waxaan dhisi doonnaa 540 kun oo kale illaa dhamaadka mashruucu socdo.
Turhan wuxuu sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay u heli lahaayeen adduun nadiif ah oo lagu noolaan karo iyo jiilal mustaqbalka ah iyo in wadarta guud ee beeruhu ay ka badan yihiin 68 milyan.
“Shaqadu waxay socotaa 148 tuneel”
Wasiir Turhan, dhererka dhererka 1.714 kiiloomitir, qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka-ku-wareejinta moodada, oo ay ka mid yihiin 1.346 kiiloomitir ee jidadka by diiwaangelinta, maanta, shabakadda jidku waxay gaadhay 3 kun 60 kiiloomitir, 2023 iyo 2035 illaa 20 sano guud ahaan, 5 mashruuc oo lagu hirgalinayo wadar dhan 532 XNUMX kiilo mitir oo dhismaha waddo weyne ah. qorshayaasha.
Turhan wuxuu sii waday ereyadiisa sida soo socota: yapım Dhismooyinka dhismaha wali waxay kusii socdaan 573 kiiloomitir ee mashaariicdan. Qaybta hartay, howlaheena diyaarinta mashruucu way sii soconayaan. Kharashaadka maalgashiga ee 4ta mashruuc ee aan ku sameyno tusaalaha dhismaha iyo ka shaqeynta wadooyinka waa 109 billion 820 million TL. Dammaanadda guud ee aan ku bixinno mashaariicdan waa 9 bilyan 640 milyan oo gini. Fursadda ah in lagu fuliyo dhammaan mashaariicda muhiimka ah, oo ay ku jiraan mashruucyada waddada weyn, iyada oo loo marayo dhisidda iyo socodsiinta habka wareejinta, waxaa lagu xaqiijiyey maalgelinta ay bixiyeen hay'adaha maaliyadeed ee shisheeye taas oo uga mahadcelineysa xasilloonida dhaqaale iyo siyaasadeed ee aan gaarnay intii ay jirtay xukuumadihii AK Party. ”
17-kii sano ee la soo dhaafay, dhererka tunnel-ka ayaa lagu kordhiyey 9 jeer dhererka buundada iyo buundada ayaa lagu kordhiyey 2 jeer.Dhan Turhan wuxuu sheegay in 2016 milyan oo gaadiid ah ay gudbeen tan iyo 48, markaasoo Eurasian Tunnel ay ka soo galeen adeeg ka yimid mid ka mid ah mega mega taas oo ka dhigaysa Istanbul mid raaxo leh. Cahit Turhan wuxuu yidhi;
"Turkey ee guud ahaan 533 kilomitir oo dherer ah, shaqo tunnel sii at 148. Mashruucu wuxuu kusii socdaa 636 wado oo dhererkeedu yahay 250 kilomitir. Mashruuca 142 tune oo 46 kiiloomitir dherer ah ayaa diyaar ah. Gümüşhane Zigana, Sivas Geminbeli, Erzurum Kop, Van Güzeldere ayaa ka mid ah tuneesooyinka aan sii wadno dhismaha. 17-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan dhammeynay dhismaha 333 kun 2 buundooyin iyo waddo dhererkeedu yahay 955 kiiloomitir. Kuwaas waxaa ka mid ah, Nisibi, Ağın, Hasankeyf tusaalooyinkii ugu horreeyay ee maskaxda ku soo dhaca.
Hawlaha dhismaha waxay kusii socdaan 62 buundooyin iyo wadooyin dhererkoodu yahay 539 kiiloomitir. Buundada Kömürhan iyo jidka Eğiste ayaa ka mid ah dhismayaasha farsamada ee ugu muhiimsan. Sanadka 2019 oo keli ah, waxaan ujeedadiisu ahayd inaan dhammeyno 23 buundo, waddo iyo isgoysyo dhererkoodu yahay 92 kiiloomitir. Waxaan ka dul fuulnay bartilmaameedka. Waxaan dhammeynay 40 buundooyin, waddo gogol dhaaf iyo isgoys 171 kilomitir ah. Waxaan hagaajinay 1.077 buundo waxaanan dib u celinay 256 buundooyin taariikhi ah. Dhererka guud ee 8 922 buundooyinka u adeega gaadiidka ayaa gaarey 644 kiiloomitir. ”
Cahit Turhan, baaxadda dhulgariirka xoojinta, oo ay ku jiraan laba buundooyin oo ku yaal gobolka Marmara, oo ay ku jiraan 239 buundooyin iyo buundooyin leh 5 buundooyin ayaa dhammaystiray shaqadooda, ayuu yidhi.
Maalgashiga wadooyinka tareenka
Turhan wuxuu cadeeyay inay u arkaan wadada tareenka mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhaqdhaqaaqyada horumar waara isla markaana ay sameeyeen dadaallo badan si dib loogu soo nooleeyo aaggan dayacan.
Ra'iisul-wasaaraha Recep Tayyip Erdogan diiwaanka inay sameeyaan siyaasad ay dib-u-gobolka Tareennada Turhan, ay dayactir oo dhan oo ka mid ah khadadka ugu muhiimsan ee shabakadda jira 11 kun oo 590 kiiloomitir tareen, waxay dib u habayn ay kaabayaasha ka dib 156 sano waxa u dhaxeeya, line tareenka ugu horeysay Turkiga, kaas oo sheegay in ka line Aydin-Izmir.
Turhan wuxuu tilmaamay in markii ugu horeysay muddo 40 sano gudahood ah, ay ku xireen xarun goboleed shabakad tareemo oo qadka Tekirdağ-Muratlı sidaas darteedna dekeddii Tekirdağ ay gaartay tareenka.
Turhan waxay xasuusineysaa furitaanka qeybta gaarka loo leeyahay ee tareenka, 1.213 kiiloomitir oo khadka tareenka xawaare sare leh ayaa yiri.
Wadooyinka Ankara-Eskişehir-Istanbul, Wadooyinka Ankara-Konya-Istanbul, qiyaastii 52 milyan oo safaro ayaa ka dhacay Turhan la duubay, ayaa yiri:
Sadece Waxaan qaadnay ku dhawaad ​​200 milyan oo rakaab dhammaan wadooyinka tareenka sanadkan oo keliya. Waxaan hadda sii wadaynaa dhismaha 1.889 kiiloomitir ee Wadooyinka Tareenka Xawaaraha Sare ee u dhexeeya Ankara-Izmir iyo Ankara-Sivas. Marka lagu daro Khadadka Tareenka Xawaaraha Sare, waxaan sidoo kale dhisnaa khadadka tareenka xawaaraha sare halkaas oo gaadiidka xamuulka iyo rakaabka lagu wada qaadi karo. Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Nigde-Mersin-Adana, Osmaniye-Gaziantep, Çerkezköy-Kapıkule iyo Sivas-Zara 1.626 kiiloomitir oo xawaare xawaare sare ku socda ayaa wali socda. 429 kiiloomitir oo jidadka tareenka caadiga ah iyo wadar dhan 3 kilomitir oo dhismaha tareenka ah ayaa socda. ”
Waxaan hiigsaneynaa inaan sare u qaadno heerka qadka ilaa 2023 boqolkiiba sanadka 77 ”
Wasiirka Turhan, tareenka xawaaraha sare leh iyo Khadad tareen xawaare sare leh iyo saldhigyo ku yaal gobollada ay idaacadda leedahay taabasho ka duwan, mashaariicda ku saleysan qaab dhismeedka dhaqanka ee magaalooyinkan, ayay yiraahdeen.
Turhan wuxuu yiri: saysinde Thanks to our dadaalka casriyeynta, waxaan aragnaa in tirada shilalka wadooyinka tareenka hoos udhaceen 1988 boqolkiiba marka aan isbarbar dhigno muddadii u dhaxeysay 2002-2003 iyo 2018-77. Waxaan ku lifaaqnaa muhiimad gaar ah aasaasida warshadaha tareenka ee qaranka iyo kan gudaha iyo inaan ku xerno jidadka tareenka ee xarumaha wax soo saarka iyo dekedaha. Waxaan aasaasnaa xarumo logistics si loo kordhiyo tartannada ganacsiyadeenna, si aan u fududaato fursadaha suuqgeynta iyo in aan ka dhigno isku-dhafka gaadiidka mid aad u firfircoon. ”
tareen si degdeg ah qalabka ku habboon Turkey ee la baabuurta xamuulka qaranka in mar dambe ma isticmaali soo saaro qayb muhiim ah oo ku fiiqaya, ee ay dajisaa Electric Qaranka iyo Diesel tareenka ayaa sheegay in halka shaqada sii waday in ay helaan tartan heer caalami ah.
Cahit Turhan, Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Qaranka oo ay weheliso Barnaamijka Iskaashiga Wershadaha ee dhinaca jihaynta shaqadu waa sii soconayaa, illaa 2023 294 kiiloomitir khadka isgoyska ayaa sheegay in ay higsanayaan in la dhammaystiro.
Wadarta guud ee rakaabka ayaa gaarey 211 milyan ”
Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, wuxuu tilmaamay in duulista rayidka ee Turkiga ay noqotay quwad caalami ah iyadoo la raacayo codsiyada iyo qawaaniinta ay sameeyeen 17-kii sano ee la soo dhaafay.
Isagoo carrabka ku adkeeyay in rakaabka rakaabka ah ee gudaha loo furay tartan, Turhan wuxuu sheegay inay kordhiyeen tirada gegooyinka diyaaradaha ee firfircoon laga bilaabo 26 illaa 56 muddadan.
Turhan wuxuu xasuusiyay in markii garoonka diyaaradaha Istanbul la soo gabagabeeyo ay noqon doonaan mid ka mid ah garoomada diyaaradaha aduunka ugu weyn oo leh 200 milyan oo rakaab ah ayna sii wadato sida soo socota:
“Intaa waxaa sii dheer, waxaan sii wadaynaa dhismaha Rize-Artvin, garoonka labaad ee laga dhisayo badda ka dib Ordu-Giresun, oo ah mid ka mid ah garoomada ugu yar adduunka, taas oo xoojin doonta mowqifkeenna mid ka mid ah meelaha muhiimka ah ee loo raro iyo xarumaha wareejinta ee waddankeenna. Waxaan ka dhisnay garoomo badan oo cusub bariga iyo koonfurta bari ee Anatolia. Waxaan ku xirnay Bingöl, Şırnak, Hakkari, Ağrı, garoomada diyaaradaha ee Kars oo leh gobollada iyo gobollada.
Dhinac waxaan ku dhisi doonaa garoomo cusub, dhanka kalena waxaan dhisi doonnaa xarumo casri ah. Dhawaan, waxaan dhameystirnay garoomada diyaaradaha Diyarbakır, Van, Çanakkale, Sinop, Muş, Balıkesir iyo Kahramanmaraş. Waxaan sidoo kale xaqiijin doonnaa mashruucyada dhismaha ee Terminalka Gaziantep, Samsun Çarşamba, Cappadocia iyo Kayseri Airport. Waxaan aragnaa macnaha dhammaan shaqooyinkaan oo ah kordhinta taraafikada ugu wanaagsan ee rakaabka. Wadarta guud ee rakaabka ayaa gaarey 211 milyan. Waxaan nahay wadanka ugu dhaqsaha badan hormarka shabakada duulista. Waxaan u duulnaa 126 meelood oo 326 dal ah. Isbeddelka qaybta duullimaadyada ayaa gaadhay 143 bilyan liras halka shaqadu ay gaadhay 209 kun. ”
"Waxaan ka shaqeynaynaa dhismaha 505 km wadada caqliga leh"
Wasiirka Turhan, wanaagsan Turkey ayaa sheegay in ay la siyaasad qorshaysan badda guuraan si ay u sameeyaan isticmaalka ugu wanaagsan ee faa'iidooyinka goobta.
Maraakiibta Turkiga ayaa leh 19, adduunka oo dhan 15 illaa 190 oo sheegaya in Turhan, wadarta xamuulka qaada ay dhan tahay 460 milyan oo tan iyo XNUMX milyan oo tan, ayuu yiri.
Isaga oo tixraacaya Mashruuca Canal Istanbul, ayuu yiri Turhan, ik Waxaan go'aansanay wadada Kanal Istanbul, oo bixin doonta badal Bosphorus oo noqon doona dammaanad qaadka amniga badeecada iyo nolosha. Waxaan dhameystiri doonnaa mashruuca iyo howlaha qorsheynta oo aan bilaabi doonno dhismaha. Waxaan xushmeyneynaa dhalleeceynta kuwa aan macluumaad toos ah ka haynin mowduucan, laakiin waxaan u suuragelinay suuragalnimada mashruuca faahfaahinta ugu yar, iyada oo aan wax shaki ah laga qabin. Waxaas oo dhan waxaan ku sameyneynaa jaceylka dowlad weyn iyo dalka hooyo. ”
Dukumiintiyada Istaraatiijiyadeed ee Xeeladaha Sirdoonka Qaranka iyo Qorshe Ficil ayaa soo jiitay diyaarinta Turhan, waxay sheegeen inay ka shaqeynayaan dhismaha 505-kilomitir oo caqli gal ah.
Turhan wuxuu rajeeyay in miisaaniyad Wasaaradiisu faa’iido u yeelan doonto.
Celcelis ahaan kobaca sanadlaha ee fiber waa 20 boqolkiiba ”
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, oo ka jawaabaya su'aalaha xildhibaanada baarlamaanka Golaha Guud ee Wasaaradda ee ku aadan miisaaniyadda wasaaradiisa, ayaa dhameystirtay Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Kongo-Karaman oo dhererkiisu dhan yahay 423 km Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla) - Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Mersin-Adana rubucii labaad ee 102. wuxuuna qorsheeyay inuu u gudbo tareenka xawaare sare ku socda.
Turhan, 135 kiiloomitir ee Karaman-Ulukışla qaybta 2022, Ulukışla-Yenice qaybta waxaa loogu talagalay in la dhammeeyo sannadka 2025, waxaa lagu muujiyey dhismaha 67-kilomitir Adana-Mersin, shaqada diyaarinta hindisaha ayaa la sii wadaa, mashruucan ayaa la bartilmaameedsanayaa in la dhammeeyo 2022, ayuu yiri.
Wasiirka Turhan, garoonka diyaaradaha Kahramanmaras ee Istanbul maalin kasta oo ka mid ah usbuuca, shan maalmood Sabiha Gokcen, afar maalmood ayaa garoonka diyaaradaha Ankara Esenboga, isagoo muujinaya duullimaadyada wadajirka ah, VOR, DME iyo qalabka loo yaqaan NDB ee heerarka caalamiga ah, ayuu yiri.
adeegyada broadband Fiber dalka Turkiga tan iyo markii 2010 First soo bandhigay sannadihii la soo dhaafay koritaanka celceliska sannadlaha ah ee boqolkiiba 20 in ku yidhi Turhan, ayaa yiri:
Ilaa iyo maanta, 3,1 milyan oo macaamiil ayaa la gaarey. Iyada oo la raacayo horumarintan tirada macaamiisha, kaabayaasha ayaa sidoo kale horumar sameeyay. Xaaladda guud, tirada qoysaska ku jira burooyinka ayaa gaadhay 2015 milyan qeybtii hore ee sanadka 9, oo ka badatay 14 milyan ilaa maantadan oo ay kor u kacday 55 boqolkiiba afartii sano ee la soo dhaafay. Intaa waxaa sii dheer, dhererka kaabayaasha fiber-ka ee xilligaan ayaa kordhay 40 boqolkiiba oo ka sarreysay 371 kun oo kiiloomitir. Nidaamka macluumaadka kaabayaasha isgaarsiinta elektiroonigga ah waxaa loo sameeyay in lagu soo uruuriyo macluumaadka kaabayaasha isgaarsiinta elektiroonigga ah ee hawl wadeennada iyagoo adeegsanaya xog keliya. Iyada oo la adeegsanayo EHAB, waxaa la rajaynayaa in dhererka shabakada fiberka iyo tirada macaamiishooyinka ay si dhakhso leh usii kordho maadaama dhismayaasha kaabayaasha hawl wadeenada la fududeeyo lana dardar galiyo. ”
Wasiirka Turhan, Mersin-Antalya wuxuu socdaa Mashruuca Wadada Xeebta Badda Mediterranean-ka oo dhererkiisu yahay 479 kiiloomitir, dhameystirka wadadaas oo gaabinaysa isagoo bixinaya 40 kiiloomitir ilaa 439 kiiloomitir, ayaa yiri wadada. 399 kiiloomitir oo wadada ayaa la soo gabagabeeyey, isagoo sharraxaya Turhan, wuxuu sheegay in mashruucan loogu talagalay in lagu dhammeeyo dhammaan 2023.
Wadada Han Karaman-Mut-Silifke waa wadar dhan 150 kiiloomitir 99 kiiloomitirna waa lasoo gabagabeeyey sanadihii hore. Hawlaha dhismaha wadooyinka ayaa sii wadaya 51 qaybood oo wadarta dhererkeedu yahay 5 kiiloomitir u dhexeeya Karaman iyo Silifke. Wadada 'Sertavul Tunnel', shaqadu waxay wadataa 8 waddo oo wadooyinka loo qorsheeyay in la dhammeeyo 2022. "
Cahit Turhan, Mashruuca Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Yerusa-Kayseri waa la dhammeeyay, shaqada diyaarinta qandaraaska ayaa sii socota oo hindisada ayaa bilaabmi doonta maalmaha soo socda, ayuu yidhi.
Wadada Pınarbaşı-Gürün oo ah waddo laami ah oo loo furay taraafikada oo qeexaya Turhan, Pınarbaşı-Gürün Mazıkıran Tunnel oo u dhaxaysa howsha mashruucu wuu soconayaa, ka dib waxaa loo soo jeediyay barnaamijka maalgashiga in la qorsheeyo in la waafajiyo miisaaniyada, ayuu raaciyay.
Marka laga soo tago miisaaniyadaha 2020 ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Agaasinka Guud ee Wadooyinka, Maamulka Teknolojiyada Macluumaadka iyo Isgaarsiinta iyo Duulista Guud ee Duulista Rayidka ayaa sidoo kale laga aqbalay Golaha Guud ee Golaha Qaranka ee Qaranka Turkiga.
Miisaaniyadda Wasaaradda Gaadiidka ayaa looga doodayaa
Miisaaniyadda IMM ee la ansixiyay
Heerka ugu sareeya ee Miisaaniyadda 2018 ee Wasaaradda Gaadiidka
Miisaaniyadda nidaamka tareenada ee magaalada Metropolitan ayaa lagu go'aamiyey
Miisaaniyadda SAMULAZ kuma qancin
Madaarka Ankara Esenboga
Khadadka Tareenka Xawaaraha Sare ku socda
Wadada Karaman Mut Silifke
Tareenka Qaranka ee Diisel
Wadada Pınarbaşı Gürün
Duulimaadyada madaniga ah ee Turkiga
cimri dheer jidadka waaweyn Turkey
Miisaaniyadda 2020 ee Wasaaradda Gaadiidka
Nidaamka Gaadiidka Qaran ee Sirdoonka
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Yerkoy-Kayseri